Indlela ukwandisa ifonti in the "Ofunda nabo": ukushintsha isikali
Ngakho namuhla sizobe ukukhuluma nawe mayelana nendlela ukwandisa ifonti in the "Ofunda nabo". Empeleni, lapha kukhona izindlela eziningana. bangabaphingi bonke bekulula ukusingatha. Ngakho ake ngokushesha ngibahlole, bese ukhetha indlela esilindele ngayo.
Ake sibone wena, kanjani ukwandisa ifonti in the "Ofunda nabo". Ake uqale nge inketho elula, okuyinto esetshenziswa iningi abasebenzisi.
Ukuze uvule umqondo, kufanele ahambe nawe ekhasini yokuxhumana. Ngemva kwalokho, sitawusebentisa lisu umqondo wethu. Uma ngikhuluma iqiniso, ungakwazi ukuhlola ku noma yimiphi imithombo Web.
Uma ucabanga ukuthi ukwandisa ifonti in the "Ofunda nabo", ngakho-ke ngeke benze lutho ngaphandle uchofoze Ctrl on the ikhibhodi bese ujike isondo igundane bebheke "ngokwami." Ekugcineni, uzobona ubukhulu kwekhasi futhi ubukhulu izinhlamvu washintsha. Uma ufika elamukelekile, umane uyekele inkinobho. Yilokho. Njengoba ubona, lutho nzima noma imilingo. Ngisho ingane uzokwazi lapho zibhekene nomsebenzi. Noma kunjalo, zikhona ezinye izindlela ezithakazelisayo ekuxazululeni izinkinga.
Manje sizozama ukuxhumana nawe ukuba baqonde indlela ukwandisa ifonti in the "Ofunda nabo" usebenzisa ikhibhodi wedwa. Uma ngikhuluma iqiniso, Kulula pretty ukukwenza. Futhi kule simo, futhi, kuba kuqhathaniswa ethandwa phakathi bonke abasebenzisi. Mhlawumbe ngoba ayidingi ukunyakaza ezingadingekile. Lokhu igijimisa kakhulu umsebenzi.
Uma ucabanga ukuthi ukwandisa usayizi wefonti in the "Ofunda nabo" Khona-ke, kusobala, ungacindezela ngokuphepha Ctrl kukhibhodi yakho, bese ngibheka abanye sidinga inkinobho. Into wukuthi manje sidinga ikhiphedi yezinombolo. Endabeni umsebenzi nge -desktop yekhompuyutha kuba ilungelo "Claudia", kodwa-notebook kuvamise lingekho. Nokho, lokhu kusebenza kuphela onobuhle amadala.
Uma uthola sidinga isokhethi, cindezela "+" nge-Ctrl zangaphambi ska. Uzophawula ukuthi isikali ikhasi, kanye nazo zonke izinhlamvu, izinombolo ukushintsha. Yilokho. Senza lokhu inqubo nje uma unganelisekile umphumela. Manje usuyakwazi ukushintsha ifonti in the "Ofunda nabo". Akunzima kangaka, kwesokudla? Khona-ke ake sixoxe nawe ambalwa izindlela ewusizo ukusiza ukuxazulula inkinga phambi kwethu.
Okulandelayo, sidinga kuphela seligundvwane isiphequluli kwikhompyutha. Sicela uvakashele yokuxhumana futhi uthole ukusebenza. Sizoba ukuvakashela izilungiselelo isiphequluli sakho. Zingase sehluke: endaweni ethile kule igiya, kodwa endaweni ethile ohlwini image.
Uma awela isevisi oyifunayo, kuyodingeka ukuya "Sondeza". Manje itholakala cishe zonke iziphequluli. Manje, uma ucabanga ngendlela ukwandisa ifonti in the "Ofunda nabo", umane hambisa isilayida kusimo ohlangothini (ngokuvamile ngakwesokudla) - wena kuzokhulisa ngokuphelele ikhasi. Okungukuthi, ushintsha isikali yayo.
Nokho, le nto akuyona yonke indawo. Ngezinye izikhathi kufanele babheke kuzilungiselelo "Ukwenza", futhi kakade bakhona "Ukulinganisa". Njengoba ubona, akukho nzima. Into esemqoka - ukwazi kuphi futhi kulokho ukulandelana ukuze uchofoze igundane. Uma ngikhuluma iqiniso, le ndlela akuyona bemthanda abasebenzisi. Mhlawumbe lokhu kungenxa yokuthi nokuqaliswa kwalo kudinga isikhathi esiningi ngaphezu kwanoma yimuphi omunye. Manje, ake sibone ukuthi yini enye kungenziwa, ukuze uqaphele umqondo wethu ekuphileni.
Futhi lapha kungenye indlela, okuyinto nakanjani ukusiza sona ekubhekaneni izimpikiswano ezaphakama. Into wukuthi iziphequluli eziningi ludinge ukuhlelwa okukhethekile, esiza ekulawuleni namabalazwe wefonti.
Ukuyisebenzisa, kufanele uvakashele ikhasi kwezenhlalo, bese uya kokuthi "Amasethingi" sigaba. Ngemva kwalokho, hlola "Ukubhalisa". Lapho ungathola sub le "Ifonti". Uma uqala ukushintsha imingcele, uzobona indlela ukushintsha yemakhono zonke ebhalwe ekhasini. It uhlala kuphela ukulungisa lokhu kulungiselelwa bese ugcine zonke izinguquko. Njengoba ubona, lutho nzima. Futhi manje sekuyisikhathi ukukhuluma kanjani ungathola konke emuva isikhundla yayo yasekuqaleni.
kakade Sifunde indlela yokwandisa ifonti in the "Ofunda nabo". Manje okwamanje ifikile lapho kufanele ubuyele izilungiselelo kokuqala. Uma sikhuluma iqiniso, lapha kukhona izindlela eziningana ukuthi uqiniseka sokujabulisa kuwe.
inketho Okokuqala - a ngocingo Ctrl on the keyboard, bese ujike isondo igundane "ku" uma nje ukubaluleka "Isilinganisi" Ngeke elilingana 100%. Lona setting kokuqala. Njengoba ubona, kukhona into ekhethekile.
Indlela yesibili - kungcono okufanayo Ctrl tsifirnoy panel. Kuyadingeka ukuba ucindezele "-" inqobo nje singazi sifinyelele 100%. Nokho, kungcono kakhulu ukunquma ukuthi uchofoze 0 - ke konke bayobuyela izindawo zabo nje okukodwa.
Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa ongakhetha isiphequluli, khetha "Sondeza". ushintsho yayo ukubaluleka 100% (noma hambisa isilayida kwindawo ezifanele), bese ukugcina. Manje usuyakwazi ukushintsha ifonti in the "Ofunda nabo".
Yekuchumana sendlela usethe ikholi yevidiyo ku "Ofunda nabo"
Yini-ke yilona ngogandaganda esikhulu kunazo zonke emhlabeni futhi 'labafowabo' nezinye
Ikhekhe lasePrague lika-Alla Kovalchuk: iresiphi
Misa isikhashana umculo: incazelo, igama izici ngokubhala